10 Days Switzerland Travel faahfaahin | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Days Switzerland Travel faahfaahin
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 31/12/2019)
safra dareen ogaato sida ay muhiimka u tahay in ay faahfaahin wanaagsan. Iyada oo eegi wanaagsan ee map-ka, adag a qorshaha gaadiidka, iyo ugu muhiimsan, hawlaha cajiib ah - aad dhigay aad 10 maalmood Switzerland safarka. Oo markay aad u socoto iyada oo loo marayo Europe, tareen oo aad qaadi karto meel kasta. Kuwa raba inay explorre Switzerland waxay u baahan yihiin in ay leeyihiin qorshe, maxaa yeelay, dalka waxaa ka buuxa indhaha breathtaking. Haddii aad u baahan tahay caawimaad ama waxyi socda la adiga kuu gaar ah, aynu isla eegno 10 maalmood Switzerland faahfaahin safarka:
Day 1 of Your 10 Days Switzerland Travel faahfaahin – Geneva
meesha aad bilaabi safarkaaga kala duwanaan doonaa, laakiin sidoo kale waa ohyahay inta ka dhiman aad joogtid. safra intooda badan ku talineynaa in laga bilaabo ka mid Geneva ama Zurich, maxaa yeelay magaalooyinka waaweyn yihiin xarumaha gaadiidka. Waa maxay more, waxaad isku dayi kartaa faahfaahin this dib ugu haddii aad jeclaan lahaa - waxa muhiimka ah waa in ay leeyihiin xiiso leh!
Haddii aad dalka galay Geneva ugu horeysay, waxaa jira dad badan oo la wax si ay u arkaan maalinta koowaad ee Switzerland aad. Waxaan ku talineynaa uunana socod Town Old iyo Xarunta City ee. Intaa waxaa dheer, Treille marinta iyo kursiga United Nations ayaa sidoo kale indhaha ku weyn.
Lyon in Tareenadu Basel
Paris si ay Tareenadu Basel
Luzern in Tareenadu Basel
Laga bilaabo Geneva waxay bixisaa fursad gaar ah inuu ku soo shirtagi agagaarka Lake Geneva wax yar ka dheer aad. Waayo, maalintii labaad ee Switzerland, waxa uu noqon lahaa fiican si ay u booqdaan magaalada Montreux, cunugtii oo u dhow u gudubno,.
Waa kaliya gaaban tareen kortaan ka fog Geneva, waana qiimihiisu uu arko. Waa maxay more, kuwa jecel Daar Dr Makumbe lagu farxad doonaa by Chateau de Chillon, iyo nooca kuwii ku caashaqi jiray shaki la'aan doono raaxaysan u gudubno,.
Day 3 – Zermatt – Alps The, Switzerland
waqti ee Switzerland qarash la'aan arkaya quruxda dabiiciga ah ee Alps The noqon lahaa sida in a socday hudheelka oo aan ku amray wixii cunto ah. Oo ma jirto sabab ay u seegi markii tareen aroortii hore aad qaadi karto si Zermatt. From waxaa jira, tacaburka ee Alps bilaabi karaan.
Waxaa badan in ay sameeyaan in Zermatt haddii cimilada waa wax fiican oo ku filan. Waxaan ku talinaynaa tug 3-saac ku wareegsan shan harooyinka, laga bilaabo Blauherd. Waa tug ah oo qurux badan iyo hab fiican si ay u bilaabaan aad Alps waayo-aragnimo.
Day 4 – Zermatt – Mar On Day 4 of 10 Days Switzerland Travel faahfaahin
Waxaad qaadan kartaa maalinta afaraad si ay u sahamiyaan Zermatt si buuxda u, maadaama ay tani waa mid ka mid ah kuwa soo jiidasho Swiss Buurta magaalooyinka. Waxaa jira webiga weyn si aad u aragto, iyo Matterhorn si aad u aragto. Haddii aad tahay khibrad dheeraad ah tub-dheer aadeyad, waxaad qaadan kartaa gelinka dambe inay soo aragto Charles Kuonen Bridge Cayrin.
Waayo, in, aad u baahan doontaa in si Randa tago, halkaas oo tug in ay buundada bilaabo. Waxay ku saabsan tug 2-saacadood ah si ay u buundada. Waxa aan raad fudud si ay u dhamaystiraan, iyo buundada laftiisa uusan itaal darnaan ee wadnaha. Si kastaba ha ahaatee, arkaan mudan tahay dhibaato.
Basel si ay Tareenadu Bern
Day 5 – Matterhorn sitoos
Si aad si buuxda u la kulmaan Alps, waa in aad qaadato fursad si aad u hesho on heerar sare. Zermatt waa barta laga bilaabi weyn, waayo,, sida aad si fudud u gaadhi karo labadaba Jannada Matterhorn sitoos iyo Gornergrat halkaas ka.
Waxay qaadataa wiishashka qaar ka mid ah si ay u gaaraan sare ee Matterhorn ah sitoos Jannada ama tareenku in Gornergrat a. labada kuwan safarada maalin bixiyaan views fantastic ah Alps, oo waxaa jira qaar ka mid ah sahaminta in la sameeyo marka aad waxaa tahay, sidoo kale.
Basel si ay Tareenadu CHUR
Bern si Tareenadu CHUR
Turin si Tareenadu Tirano
Waayo, maalintii lixaad kuu keydsan ee Switzerland, waxa la joogaa wakhtigii inay soo qabtaan qaar ka mid ah views more cajiib ah ka Schilthorn. Qabo baabuur cable ah in Schilthorn ka Murren oo wuxuu ku raaxaysan wax walba waxa ay leedahay in ay bixiyaan. makhaayad A qoqobada, badan oo dhufto ee daawashada, iyo xataa Bond Adduunka oo dhan ka heli kartaa halkaan.
Schilthorn waa ku filan si ay u buuxiso maalintii oo dhan, laakiin haddii aad dareensan tahay adventurous, hubi Lauterbrunnen sidoo. Waa tug ah ku dhex socdo dooxada a qurux badan ka buuxa joogsato tuulo yar iyo aragtida waterfalls Buurta.
Day 7 – gobolka Jungfrau
Day 7 noqon lahaa fiican ee dheereynaya booqashadaada gobolka Jungfrau iyo sii sahaminta Alps. Waxaa jira qaar ka mid ah wadooyinka hortayada caan ah oo aad qaadan karto ka Grindelwald. baabuur cable A aad qaadi karto si Mountain First, halkaas oo aad ka qaadan kartaa mid ka mid ah, xusus badan oo socodka laga heli karaa.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa shaki la'aan ah Bachalpsee Lake tug, taas oo ah safar ku wareegsan oo qaadataa qiyaastii 2 saacadood. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyaabo badan oo kale oo First, si loo hubiyo in ay bartaan goobta si fiican u.
salka waayo, maalintii aad siddeedaad 10 Days Switzerland Travel sahaminta noqon kartaa Wengen, a magaalada yar Buurta. Iyada oo ka dhacay degaanka ku, aad u sahamiyaan yaabaa Mannlichen by qaadashada baabuur cable a ilaa buurta iyo jidka lagu lugeeyo ah. Waxaa jira qaar ka mid ah kuwa intriguingly magacaabay, sida Walk Royal.
Panorama Trail ka Mannlichen in Kleine Scheidegg badan tahay in uu yahay ugu muuqaal dabiici ah mid ka mid ah. Waxay bixisaa views dooxada hoos ku qoran iyo saddexdii buuraha caanka - Jungfrau ah, Monch, iyo Eiger. From Kleine Scheidegg, tareenka a back to Wengen.
Zurich si Tareenadu Wengen
Geneva in Tareenadu Wengen
Bern si Tareenadu Wengen
Basel si ay Tareenadu Wengen
Day 9 – Luzern
U dhow dhammaadka 10 Days Switzerland Travel faahfaahin, waxaad u baahan tihiin in aad jidka ka dhigi dib magaalooyinka. Waayo, maalintii 9aad, waxaannu ku talinaynaa in booqasho uu ku Luzern, sida ay tahay magaalada ugu fiican si ay u sahamiyaan on foot. Ka dib markii socodka oo dhan, waxa ay noqon doontaa dawayn in mushaaxaan ka jidadka in search of indhaha sida Church of St. Leodegar, Museggmauer iyo Monument Libaaxa.
Luzern ayaa riverfront weyn oo badan oo dalka durkiya qurux badan. Intaas waxaa sii dheer, waa stop weyn on safarkaaga si Zurich, meesha aad doonaa in la isku dili karto booqasho.
Day 10 – Zurich iyo maalinta la soo dhaafay of our 10 Days Switzerland Travel faahfaahin
maalin Your final waa in ay ahaataa mid ay ka buuxaan, iyo Zurich waa meel ku fiican in ay ku Bixisaan. Isticmaal wakhti si aad u aragto in ay dad badan oo taariikhiga ah indhaha, sida kaniisadaha of Grossmunster iyo Fraumunster.
Zurich sidoo kale leeyahay caanka ah wadada shopping inay dalab, si loo hubiyo in aad wax ka iibsan at Bahnhofstrasse ah. Ku socda iyada oo loo marayo Town Old ka oo wuxuu ku raaxaysan sahaminta ka hor inta aanad dib u jiheysan.
Wax kasta oo aad doorato inuu ku sameeyo Switzerland, aad doonaysid in aad leedahay wakhtiga aad nolosha. Xasuuso in la qorsheeyo hawlaha aad, gaadiidka, iyo muddada ay joogi doonaan si taxadar leh. Taasi waxay xaqiijin doontaa in aad fasaxa waa kaaftoomi-free oo si dhab ah baashaal, sida ay noqon waa in.
Basel si ay Tareenadu Geneva
Switzerland waa wadan qurux badan socotada kasta oo u baahan in ay la kulmaan. aad diyaar u tahay a 10 Days Switzerland safarka? Book tigidhada tareenka aad hadda iyo ha naftaada la xaaqay by quruxda!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Days Switzerland Travel faahfaahin” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-days-switzerland-itinerary%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#traveleurope europetravel SwissAlps trainjourney tareen safarka travelswitzerland